The Speaker of the Pyidaungsu Hluttaw and Pyithu Hluttaw, U T Khun Myat donated cash to National-Level Central Committee on Prevention, Control and Treatment of Coronavirus 2019 (COVID-19) Nay Pyi Taw,9October 2020
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဒုတိယစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီမန်များ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ပထမစုံညီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၈
You can request in online to learn and visit in Pyi Daung Su Hluttaw
News of Hluttaw Speaker
The Speaker of the Pyidaungsu Hluttaw and Pyithu Hluttaw, U T Khun Myat donated cash to National-Lev...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စာ...
လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါဈေးနှုန်းဖွင့်ပွဲများကို Video Confer...
မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၄၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပါလီ...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် မဲဆန္ဒနယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်(၃)ရပ်သို့ စာတိုပေးပို့မှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော SMS Managing Software အာ...
လွှတ်တော်နှင့် UNDP/ IPU တို့၏ ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် မဲဆန္ဒနယ်ဆိုင်ရ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကျိုင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄၇/၂၀၂၀)
ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အမိန့်ကြော်ငြာစာအ...
Pyithu Hluttaw A Myothar Hluttaw The Region/State Hluttaw Law Information System Myanmar National Portal
This section is showing recent tenders from Pyidaungsu Hluttaw.
This section is showing recent job vacancies from Pyidaungsu Hluttaw.
Hluttaw Information Movie
Myanmar Union Parliament
The first regular session of the Pyidaungsu Hluttaw shall be held within 15 days from the first day of the commencement of the first session of the Pyithu Hluttaw. The Amyotha Hluttaw is also …
In the Pyidaungsu Hluttaw, there are Joint Bill Committee and Joint Public Accounts Committee. Legislation, administration, nationalities’ affairs, economic, financial, social and foreign affairs …
The laws that have been enacted at the Pyidaungsu Hluttaw sessions are mentioned.